Sida loo Fedora: U cusbooneysiinta nooca cusub ee leh Preupgrade | Laga soo bilaabo Linux
Perseus | | GNU / Linux, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Arrintan Sida loo Waxaan arki doonaa sida loo cusbooneysiiyo mid ama in ka badan noocyadii hore ee kan Fedora in nooca hadda jira ama hadda. Tani waa tarjumida maqaalka Sida loo isticmaalo PreUpgrade isku mid ah oo laga heli karo gudaha -Leaks de FedoraProject. Tarjumaadda waxaa lagu maamulayay koontadayda, marka hadaad khaladaad kahesho (kama filayo) ama sixitaan, fadlan ii sheeg faallooyinka :). Xusuusnow in dhammaan amarrada ku jira boostadan ay tahay in loo galo sida xidid ;).
Sidee loo isticmaalaa Preupgrade?
diyaar garowga waa codsi ku shaqeynaya nooc jira, xallinaya, soona dejinaya xirmooyinka lagama maarmaanka ah si kor loogu qaado nooca cusub ee Fedora. Inta lagu guda jiro hawsha preupgrade, isticmaalayaasha ayaa sii wadi kara isticmaalka nidaamyadooda. Tani waxay ku siinaysaa khibrad la mid ah cusbooneysiinta tooska ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan tixraac bogga: muuqaalada preupgrade.
Si toos ah ugu cusbooneysii nooca hadda jira
Preupgrade waxay bixisaa cusbooneysiin ku saabsan nooca ugu dambeeya ee Fedora. Looma baahna in kor loogu qaado noocyada dhexe. Tusaale ahaan, waa suurtogal in si toos ah looga cusbooneysiiyo Fedora 14 illaa Fedora 17.
Nidaamka lama cusbooneysiin karo preupgrade kiiskan soo socda:
Haddii qaybtaada / bootkaagu uu ku jiro RAID. Eeg bug 500004.
In kasta oo preudgrade-ku ay bixin karto khibrad casri ah oo guud ahaan siman, talaabooyinka soo socda ayaa lagula talinayaa ka hor intaadan bilaabin.
Soo celinta - Kahor intaadan fulinin wax shaqo dayactir ah nidaamka, waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid nuqul dhammaan xogta muhiimka ah kahor intaadan bilaabin.
Cusboonaysiinta - Codso cusbooneysiinta la heli karo ka hor intaadan ku dhaqaaqin cusbooneysiinta Fedora. Sida isticmaale xidid, u maamuli amarka soo socda:
Ku rakibida - Laga bilaabo Fedora 10, utility-ka preupgrade-ka waxaa lagu darayaa rakibida Fedora asal ahaan. Xirmada sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa gacanta iyadoo la adeegsanayo yum amarka:
Inta badan, Xirmada xirmada ayaa ku soo ogeysiin doona marka cusbooneysiinta loo heli karo nidaamkaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad go'aansato inaad gacanta ku cusbooneysiiso adoo adeegsanaya preupgrade, raac talaabooyinka hoos ku taxan.
Ku bilow utility preupgrade sida xididka adoo furaya terminal isla markaana fulinaya amarka soo socda:
Haddii aad doorbideyso codsi xariiq amar amar ah, amarka horudhac-CLI sidoo kale waa la heli karaa.
Shaashadda Dooro Siideyntaada, dooro nooca Fedora ee aad rabto inaad cusbooneysiiso, oo guji badhanka Codsiga.
Markii dhammaan xirmooyinka la soo dejiyo, dib u bilow nidaamka si aad u bilowdo rakibiyaha Fedora oo aad ugu cusbooneysiiso nooca xiga.
Xusuusin ka socota <° FromLinux: Haddii aad rabto inaad si qoto dheer ugu sii socoto hawshan, fadlan booqo maqaalka soo socda: Diyaarinta: Kordhinta Fedoras, mahadsanid Diego Fields xiriiriyaha;).
Xusuusin 2 ee <°Laga soo bilaabo Linux: Nidaamka cusboonaysiinta sidoo kale waxaa laga samayn karaa DVD rakibida Fedora.
Preupgrade waxay leedahay shuruudo u oggolaaneysa kor u qaadista fog iyadoo loo marayo VNC. Haddii aad u isticmaaleyso preupgrade hagaajinta fog, waxay u badan tahay mashiin leh cinwaan IP-ga oo taagan. Tan waxaa lagu maareeyaa amarka preupgrade:
Hawlaha dib-u-cusbooneysiinta guud
Cusboonaysiinta kadib, tallaabooyin dheeri ah ayaa lagula talinayaa in lagu dhammaystiro hawsha.
Ka saarida xirmada aan la taageerin
Xirmooyinka qaar ma taageeri karaan nooca cusub. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ka saarto xirmooyinkaan maxaa yeelay waxaad joojin doontaa helitaanka warka amniga, waxayna sababi karaan isku dhac dambe xirmooyinka cusub. Kuwaas waxaa lagu aqoonsan karaa amarka soo socda:
Raadi faylasha .rpmsave iyo .rpmnew
Ka dib markaad dhamayso hawsha cusboonaysiinta, waxaad ogaan kartaa qaar ka mid ah magacyada faylka ee ku eg .rpm badbaadi y .marwo cusub. Ha ka nixin. Nidaamka casriyeynta ayaa had iyo jeer ilaalin doona faylalka qaabeynta qaab-dhismeedka gudaha laga beddelay. Magacyada faylka ee ku dhammaada .rpmsaveve waxaa kujira isbedelada qaabeynta deegaanka. Halka magacyada loo yaqaan 'filenames' ee kudhamaanaya .rpmnew ay matalayaan feylka qaabeynta ee baakidhkiisa asalka ah softiweerka.
Waa inaad baartid dhammaan .rpmsaveve iyo .rpmnew faylasha cusub ee ay cusbooneysiisay. Waxay kuxirantahay kala duwanaanshaha, waxaad ubaahan kartaa inaad gacanta kuhesho feylasha qaabeynta. Waad heli kartaa dhammaan faylasha ku habboon amarka helitaanka.
Ikhtiyaar ahaan, si loo dedejiyo baadhitaannada soo noqnoqda inta aad tafatirka ku samaynayso, adoo adeegsanaya amarka cusboonaysiinta marka hore, ka dibna adeegsanaya meel ay ku sameeyaan baaritaannada hadhow.
Si loo xaqiijiyo in qaabeynta keydku ay sax tahay. Kadib orod:
Si loo waafajiyo xirmooyinka iyo noocyada ku jira keydka.
Meel ku filan oo ku jirta / kabaha
Fedora 13 iyo adeegsi ka sareeya asal ahaan 500 MB qeybta bootka (/ boot). Qiimaha ugu dambeeya ee cabirka / boot systemystem-ka waa 200MB noocyadii hore, tani waxay dhibaato ku noqon kartaa adeegsadayaasha oo ka cusbooneysiinaya noocaas. Xaalado badan, booska diskiga ee la sii daayay waxay u badan tahay inuu u oggolaado preupgrade inuu soo dejiyo rakibaha, laakiin kuma filna inuu maamulo rakibaha oo ku rakibo kernel cusub nidaamka bilowga. Qaybtani waxay soo bandhigaysaa talooyin caan ah oo caan ku ah shaqada. Xusuusnow: Markaad qabanaysid howlaha maamulka, hubi inaad kaydiso xogtaada kahor intaadan bilaabin.
Waxaa jira laba habab oo aasaasi ah oo lagu helo preupgrade si ay uga shaqeeyaan kiisaskaas. Qaabka ugu horeeya, waxaad u baahan tahay inaad xoreyso meel ku filan oo rakibaya si aad u rakibto xirmooyinka kernel cusub. Qaabka labaad, waa inay si ku meel gaar ah u degtaa boos ku filan / boot si loogu qasbo preupgrade inay soo dejiso rakibiyaha ka dib markii dib loo furo.
Qaabka 1: Booska banaan
Marka hore, isku day inaad ka saarto xirmooyinka kernel ee aan hadda lagu isticmaalin nidaamkaaga. Qoraalka kernel-prune.py waxaa loo isticmaali karaa in lagu aqoonsado iniinyaha si badbaado leh looga saari karo. Haddii aad dooratid inaad ka saartid iniinnada dheeraadka ah, u diyaari warbaahinta rakibidda haddii ay dhacdo inaadan ku laaban karin nidaamkii aad horey u rakibtay.
Barnaamijka rakibaadda wuxuu u baahan doonaa ugu yaraan 26 MB oo ah meel bilaash ah boot / boot. Isticmaal amarka soo socda si aad u go'aamiso qadarka booska bilaashka ah ee qaybta / boot:
Si loo aqoonsado iniinnada si badbaado leh looga saari karo, ka soo qaado qadka amarka soo socda:
Hadda, si aad dhab ahaan uga saarto noocyada yar yar ee ku qoran amarka kor ku xusan, u socodsii soo socda asalka:
Kadibna hagaaji tirada nidaamka faylalka la keydiyay adoo adeegsanaya amarrada tune2fs. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad aqoonsato qalabka xannibaadda ee nidaamka faylka / boot. Tusaalaha soo socda, / dev / sda1 waa aaladda xannibaadda nidaamka / boot faylasha.
/ dev / sda1 on / nooca bootka ext4 (rw)
Hadda, hagaaji tirada baloogyada loo qoondeeyey / faylasha faylasha adoo adeegsanaya amarrada tune2fs. Caadi ahaan, qadar yar oo boos ah oo ku saabsan qoruhu qaabka faylka loo yaqaan 'ext file' ayaa 'la hayaa' oo waxaa isticmaali kara oo kaliya maamulaha nidaamka; Tani waa in laga fogaado nidaam aan kabaha kicin doonin, iyo in loo oggolaado maamulaha xoogaa goob shaqo ah si uu gebi ahaanba u nadiifiyo qaybaha. Si kastaba ha noqotee, midkoodna kiisaskani dhab ahaantii ma khuseeyaan / nidaamka faylasha, markaa ka saarida meeshan la habeeyay waa ammaan.
Ugu dambeyntiina, iskuday inaad ka saarto faylasha aan loo baahnayn nidaamka faylasha / boot. Tani waxay inta badan ku xirnaan doontaa sida nidaamkaaga loo qaabeeyo.
Tirtirida feylasha qaldan waxay sababi kartaa nidaam aan kabaha ka kici doonin. Qaar ka mid ah musharixiinta xilka ka qaadista waxaa ka mid ah / bootiin / efi y /boot/grub/splash.xpm.gz.
Habka 2: Trick loogu talagalay preupgrade si loo soo dejiyo rakibayaasha
Habkani wuxuu u baahan yahay inaad leedahay xiriir fiilooyin leh oo internetka ah inta lagu jiro rakibidda. Haddii aad ku jirto xaalad wireless ah oo aadan ku xirmi karin adoo adeegsanaya fiilada Ethernet, waxaad u baahan doontaa inaad adeegsato habka 1 beddelkiisa.
First of dhan, ogow inta boos ee laga heli karo nidaamka / boot filesystem. df waa amarka la doonayo ee tan:
Faylasha faylka 1K-blocks Isticmaal La Heli Karo% Dhex Dhexaad
Kaalinta labaad, Abuur kayd ah oo qaadanaya boos ku filan preupgrade si loo go'aamiyo in marxaladda 2 aan hadda la rakibi karin. Preupgrade waxay ubaahantahay kudhowaad 120MB sawirka rakibida sidaa darteed waxaan hubinaynaa inaan heysano wax kayar 100MB oo banaan. Tusaale ahaan, nidaamka faylka, taasi waxay ka dhigan tahay inaan u baahan nahay inaan buuxino 60 MB. Waa tan sida loo sameeyo asal ahaan:
Kaalinta saddexaad, u socod preupgrade sidii caadiga ahayd. Marxaladaha hore, ka hor intaadan soo dejin xirmooyinka, preupgrade waa inay kuu sheegtaa inaysan jirin meel ku filan oo lagu soo dejiyo rakibayaasha, laakiin inaad kala soo bixi karto markii aad dib u bilowdo nidaamka haddii aad leedahay xiriir fiilo leh. Waad riixi kartaa sii wad. Marka preupgrade uu diyaar yahay, dib ha u bilaabin isla markiiba. Taabadalkeed, tirtir faylka / boot / preupgrade_filler oo hubi in kombiyuutarkaagu ku xiran yahay shabakadda adoo adeegsanaya fiilo Ethernet ah. Kadib waxaad dib u bilaabi kartaa nidaamka.
Kaalinta afaraad, kumbuyuutarku waa inuu kufuraa barnaamijka dejinta, ku xirnaadaa internetka adoo adeegsanaya fiilada Ethernet, oo wuxuu bilaabayaa soo dejinta sawirka rakibayaha stage2. Kadib cusbooneysiintu waa inay u sii socotaa sidii caadiga ahayd.
Cusbooneysiinta ma rakibto ka dib markii dib loo furo
Haddii aad leedahay qaabeynta qaabab badan, feylka menu-ka ee GRUB / boot adeegsado wuu ka duwanaan karaa menu-ka wax ka beddelaya preupgrade / boot. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan doontaa inaad ku amarto xoqin si aad u isticmaasho feylka u dhigma si aad u dhammaystirto cusbooneysiinta kabaha. Haddii tan aan la samayn, ka dib markii preupgrade uu dhammaystiro soo dejinta faylka iyo rakibidda, ma jiri doonaan isbeddel muuqda oo ku saabsan bootka. Nidaamku si fudud ayuu dib ugu bilaabi doonaa qaabkii hore.
Kabaha Preupgrade oo leh kernel casriyayn ah oo ah tallaabo dhexdhexaad ah. Marka nidaamka la casriyeeyo, preupgrade wuxuu badalayaa ikhtiyaarka casriyaynta kuleylka kumeelgaarka ah, oo leh ikhtiyaarka kernel-ka la casriyeeyay. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jira laba isbeddel oo lagu sameeyay bootloader-ka: xulasho cusbooneysi ku meel gaar ah, oo ay ku xigto ikhtiyaar joogto ah illaa cusbooneysiinta soo socota.
Qalabka wax lagu rakibo ee loo yaqaan 'GRUB boot loader' ayaa loo isticmaali karaa inuu ka soo baxo khadka amarka, ama faylka /boot/grub/menu.lst waa la beddeli karaa si loo abuuro ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah (Tusaale shaashadda shaashadda 'GRUB boot menu') (Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan GRUB, fiiri buuga gruub).
Mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka ku saabsan guluubka ayaa la isticmaali karaa. Fahmitaanka wanaagsan ee mawduuca, kuwan soo socdaa waxay sharraxayaan sida loogu sameeyo xariijinta taliska iyo tafatirka faylka menu.lst.
Si kastaba ha noqotee, maaddaama cusbooneysiintu kaliya u baahan tahay in la maamulo hal mar oo cusbooneysiinta nidaamka ay u badan tahay inay u baahan tahay dib-u-soo-kabasho, habka ugu habboon ayaa laga yaabaa inay tahay in gacanta lagu bilaabo cusbooneysiinta iyada oo loo marayo khadka amarka cirifka, ka dibna hal mar Ka dib markii cusbooneysiintu dhammaato, ku dar ikhtiyaar feylka menu.lst ee cusboonaysiinta Fedora. Tani waxay u dhigmaysaa kan habka 1, tallaabooyinka 1-3, oo ay ku xigto habka 2, tallaabada 4.
TALLAABADA 1: Aqoonso goobta kala-goynta
Aqoonsiga wadista iyo qaybinta galkaaga Fedora / boot. (Faahfaahin ka eeg Heshiiska Magacaabista Grub). Tusaale ahaan, haddii aad si buuxda ugu rakibtay Fedora qaybinta afar iyo toban ka mid ah darawal labaad oo adag, / boot ayaa xidid ku ah (hd1, 13).
TALLAABADA 2: Kabaha goobta xijaab
Dib-u-dhiska, ku qor "c" si aad u gasho boodhka degdegga ah. Adoo isticmaalaya lambarrada ku habboon ee darawallada iyo qoruhu, ku qor amarradan soo socda:
kernel / boot / cusbooneysiin / vmlinuz
Tani waxay bilaabi doontaa rakibida cusbooneysiinta.
TALLAABADA 3: Xulo sawirka rakibida
Rakibida cusbooneysiinta ayaa bilaabi doonta wada hadal kalkaaliye caafimaad. Ka dib markaad doorato luqadda iyo nooca kumbuyuutarka, xulo darawalka adag habka rakibaadda. Wadahadalka xiga wuxuu ubaahan doonaa qaybinta iyo macluumaadka galka sawirka rakibaadda. Xulo xijaab ka menu hoos-hoos. (Xusuusnow in nambarku uu ka bilaaban doono qeybta kala qaybsan. Si kale haddii loo dhigo, xididka (hd1, 13) wuxuu u muuqan doonaa sida / dev / sdf14). Ugu dambeyntiina, geli meesha feylka rakibaadda sawirka: /boot/upgrade/install.img.
Rakibaadda ayaa si caadi ah u socon doonta xilligan. Kadib markaad dhammaystirto cusboonaysiinta, waxaad ubaahan doontaa inaad nidaamka kabaha kubarto ama aad gacanta ku cusbooneysiiso adoo galaya kernel-ka cusub iyo faylasha initrd.img ee xariiqda amarka grub, ama kudar gal gal faylka menu.lst. Tallaabadani waxay ku faahfaahsan tahay qaybta xigta.
Qaabka 2: Wax ka beddel faylka 'GRUB menu.lst'
Beddel ahaan inaad geliso amarrada GRUB isla markiiba dib u soo kabashada, waxaad sidoo kale tafatiri kartaa faylka 'GRUB menu.lst' si aad ugu darto ikhtiyaar kuu oggolaanaya inaad ka doorato bilowga hawsha cusbooneysiinta miiska 'GRUB boot menu'. Maaddaama cusbooneysiintu u baahan tahay oo keliya in la ordo hal jeer, ka dib marka la cusbooneysiiyo waxaad u baahan doontaa inaad dib-u-habeyn ku sameyso menu.lst, ka saar xulashada boot boot-ka cusbooneysiinta menu-ka, oo ku dar gelinta boot-ka kernel-ka cusub.
Aqoonsiga wadista iyo qaybinta galkaaga Fedora / boot (Faahfaahin ka eeg Heshiiska Magacaabista Grub). Tusaale ahaan, haddii aad si buuxda ugu rakibtay Fedora qaybinta afar iyo toban ka mid ah darawal labaad oo adag, / boot ayaa xidid ku ah (hd1, 13).
TALLAABADA 2: Tafatir menu.lst
Raadi oo furo faylka /boot/grub/menu.lst. Haddii faylkani ku yaal qayb kale, hubi faylasha ku jira / warbaahinta. Adoo isticmaalaya lambarrada ku habboon ee darawallada iyo qoruhu, ku qor soo gelinta soo socota feylka menu.lst:
cinwaanka Fedora Casriyayn
Keydso faylka oo dib u bilow nidaamka. Ka xulo cusbooneysiinta Fedora miiska boot-ka 'GRUB'.
Rakibida cusbooneysiinta ayaa bilaabi doonta wada hadal ncurses ah. Ka dib markaad doorato luqadda iyo nooca kumbuyuutarka, xulo darawalka adag habka rakibaadda. Wadahadalka xiga wuxuu ubaahan doonaa qaybinta iyo macluumaadka galka sawirka rakibaadda. Xulo xijaab ka menu hoos-hoos. (Xusuusnow in nambarku uu ka bilaaban doono qeybta kala qeybsan. Si kale haddii loo dhigo, xididka (hd1, 13) wuxuu u muuqan doonaa sida / dev / sdf14).
Ugu dambeyntiina, geli meesha feylka rakibidda sawirka: /boot/upgrade/install.img. Rakibaadda ayaa si caadi ah u socon doonta xilligan.
TALLAABADA 4: Nadiifinta Menu.lst
Ka dib markii casriyeynta la dhammeeyo, waxaad u baahan doontaa inaad kabaha nidaamka ama aad gacanta ku cusbooneysiiso adoo galaya faylasha cusub ee faylka iyo initrd.img ee khadka amarka grub, ama adoo ku daraya gelitaanka faylka menu.lst.
Waxyaabaha soo socdaa ayaa tusaale u ah soo gelitaanka qallafsan ee Fedora Core 10, oo ku yaal qaybta afar iyo tobnaad ee darawalka labaad.
cinwaanka Fedora Core 10 (on / dev / sdb14)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27.5-117.fc10.x86_64 ro xasilloonaan la'aan
Soo hel kernel-ka iyo faylasha la cusbooneysiiyey, kuwani waxay ku jiraan / kaydinta faylka qaybta Fedora, oo samee gal ay cinwaankiisu la mid yahay kernel iyo initrd files.
Ugu dambeyntii, ka saar gelinta boot boot-ka cusbooneysiinta menu.lst.
Fuentes: Ku xusan qodobka dhexdiisa;).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo Fedora: U cusbooneysii Nooca Cusub ee leh Preupgrade
Waaaooo !! Dhex dhexaadinta maqaalka waa inaan ka tago akhriska, maahan inay caajiso tahay, laakiin halkii ay ka ahaan lahayd mid aad u faahfaahsan oo ay fiicnaan lahayd in la isku dayo tallaabo kasta oo goob dhab ah lagu barto.
Waad ogtahay taas ... Waxaan ku keydin doonaa sanduuqa sanduuqayga =)
Waxaan ka baqayaa in waxyaabahan cajiibka ah ee aad ka abuurtay fedora inay lumaan waqtiga markii aad ku darto qoraalada cusub sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaad isticmaasho xoogaa ka mid ah balooggaaga oo leh xiriiriye fedora howto ah si ay ugu noqdaan tixraac xamaasad, cafi talo soo jeedintayda, waa uun in qoraaladan fedora ay mudan yihiin inaad isha ku hayso iyadoon loo eegin waqtiga ka gudbay tan iyo markii la daabacay
Aad baad ugu mahadsantahay ereyadaada iyo talo soo jeedintaada, waxaan u soo bandhigi doonaa fikradaada maamulada kale si aan u aragno hadii aan wax ka qaban karno :).
Weyn ma aanan aqrin wax walba ilaa cusbooneysiinta haddii aan dhibaatooyin la kulmo waan sii wadi doonaa aqrinta.
maqaal aad ufiican oo loogu talagalay fedoritas .. waxa kaliya ayaa ah inaad abuuri kartay dhowr qoraal oo kaliya maqaalkan ... iska ilaali KISS .. hahahahaha
XD, haa, aad baad u saxantahay. Maqaalka waa mid aad u balaaran: P, laakiin ma aanan dooneynin in qof wax ku dhex lumo waana inuu sugaa jawaabta dhibaatadooda :).
Dhab ahaan, sida wanaagsan ee xiriirku kuugu adeegay 😀
Hubaal, wixii tabaruc ah waa la soo dhaweynayaa, mahadsanid walaal;).
Waxaan kaliya rabay inaan weydiiyo haddii, tusaale ahaan, waxaan cusbooneysiiyaa bil kadib markii la sii daayay nooca ugu dambeeya ee fedora, waa la cusbooneysiiyaa illaa maalinta ay soo baxday mise sidoo kale waxay rakibtaa cusbooneysiinta oo ay ku jiraan bisha kadib markii la sii daayay
Ka waran Alberto, way fiicantahay in aan kula kulmo, preupgrade wuxuu si buuxda u cusbooneysiiyaa nidaamka illaa ugu dambeysay ee la heli karo :).
Waa maxay qayb ka mid ah dhadhanka, fadlan ... si xamaasad leh loogu sameeyo xamaasad!
Ka waran FIRPO, aad baad ugu mahadsantahay faalladaada: D, waa wax lagu farxo in halkan lagugu siiyo.
Waxaan ka cusbooneysiiyay fedora 16 illaa 17 iyada oo loo marayo preupgrade iyada oo loo marayo wifi iyada oo aan wax dhibaato ah jirin wax walba way fiicnaayeen, waxay qaadatay muddo, waxaan qiyaasayaa sababtoo ah waxay ahayd wifi isla maalintaasna nuqulkii waa la sii daayay, laakiin dhamaadka, waxaa jiray fedora 17 , sidii ay ahayd markii hore, iyada oo aan dib loo raacin wax. oo leh dhammaan koodhadhka iyo fiilooyinka.
Waxaan ku dhajin doonaa shaashadda shaashadda qaar ka mid ah cusbooneysiintan barteyda goor dhow.
Waad ku mahadsan tahay qoraalka, laakiin uma maleynayo inay i caawin doonto tan iyo markii aan u baahnaan lahaa inaan cusbooneysiiyo nooca min 1 yarrow ilaa midka hadda socda. Waxay dhacdaa inaan haysto server aan lahayn awood disk ah waxaanan u baahanahay inaan u wareejiyo nooca HD kale oo leh awood weyn halkaas haddii aan cusbooneysiin karo. Laakiin aniga waxay igu kacaysaa "0" inaan helo waxyaalahaas duugga ah.
Haddii qof uu hayo wax macluumaad ah, wixii macluumaad ah ee la ii soo gudbin karo waa la qadarinayaa.
Waa hagaag maadaama aan ku cusub ahay LINUX illaa iyo hadda waxaan aqriyaa qoraalo badan.
Waxaan qabaa su'aal waana tan soo socota: Marka laga hadlayo FEDORA, imisa jeer ayey cusbooneysiisaa ama halkii nooc cusub uu soo baxayaa? Xilligan waxaa jira FEDORA 17.
Oo markay noocyadan cusubi soo baxaan, ma waxaa lagugula talinayaa inaad horay-u-cusbooneysiiso?, Ama dib-u-dhigto wax walba?
Miyey la mid tahay daaqadaha? Hagaag, ma jecli inaan isbarbar dhigo daaqadaha laakiin waan cusubahay waxaanan ku dhammeeyaa isbarbardhiga wax walba iyo daaqadaha si aan u ogaado farqiga u dhexeeya labada.
- lfedora 18 wuxuu soo baxayaa Nofeembar 6
- fedora 6dii biloodba mar ama wixii la mid ah, sii deynta nooca.
- maya uma dhigma winbugs sida aad u malayn karto isbarbardhiggu waa doqon.
- Waxaan kugula talinayaa inaad dhowr toddobaad sugto si aad u gaarto 18, maxaa yeelay had iyo jeer waa inay wax hagaajiyaan
Waayahay Waad ku mahadsan tahay macluumaadka.
Waxaan sugi doonaa Nofeembar FEDORA 18
Raaxo! .. Iskuday inaad aragto sida ay tahay!.
Maqaal aad u wanaagsan, waa lagu qanacsan yahay in lagu akhriyo waxyaalahan oo dhan Isbaanish 😉
Hal su'aal: goorma ayaan ordi doonaa "Ka saarista Xidhmada aan La Taageerin"? Kahor kahor preupgrade?
Jawaab lsri 8088
Gaarey: macmiil u ah Google Drive oo laga heli karo Ubuntu